घरेलू कोर्ट को कुनै पनि वर्गीकरण मुख्यतया आफ्नो उद्देश्य मा आधारित छ। कार्गो जहाज नै मा वर्गीकृत छन्। नागरिकहरु व्यावसायिक, फ्लिट र प्राविधिक सेवा र समर्थन गर्न सम्बन्धित परिवहन विभाजित छन्।
यी कार्गो जहाजहरु नदी र समुद्र छिटो को मुख्य कोर छन्। तिनीहरूले cargoes को एक किसिम ले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। कार्गो जहाज, कार्गो र विशेष: यो समूह आफ्नो आन्तरिक वर्गीकरण छ। वास्तवमा, कार्गो टैंकरों र सुक्खा कार्गो छन्, र यी अदालत भेटघाट र प्रकार को एक किसिम समावेश गर्नुहोस्।
विवरण थोक वाहक, सामान्य उद्देश्य र कडाई परिभाषित भार बोकेको लागि विशेष सहित, यी प्रकार प्रत्येक छलफल गरिनेछ। सामान्य उद्देश्य - सामान्य कार्गो जहाजहरु परिवहन लागि डिजाइन। तिनीहरूले भन्दा साधारण प्रकार हौं।
ड्राई कार्गो जहाजहरु
ड्राई थोक कार्गो जहाजहरु - यो ती सबै मुख्य भाग विशाल कब्जा धारण संग जहाज। तिनीहरूले पोत को आकार मा निर्भर गर्दछ, एकल, डबल र trohpalubnymi मा आउनुहोस्। इन्जिन कोठा सामान्यतया डिजेल इन्जिन बोट, लागत यो चढाएको त स्थित वा नजिक कार्गो को एक जोडी धारण नाक गर्न सारे छ। प्रत्येक लागि पकड कार्गो जहाज परियोजनाहरू यसको आफ्नै प्वाल समावेश, वा एक, mechanically बन्द।
कार्गो एजेन्ट अप गर्न दस टन को क्षमता संग नल वा व्यक्तिगत तीर समावेश, र भारी जहाज थप शक्तिशाली साथ सुसज्जित - दुई सय टन सम्म। जमाई छ आधुनिक समुद्री कार्गो जहाजहरु तरल खाना तेल लागि perishable सामान र गहिरो ट्यांक लागि धारण। तर नदी सुक्खा कार्गो जहाजहरु, आकार र क्षमता बिना संग लोड र ओराल्नको सञ्चालन पूरा गर्न सजिलो छ, जो केवल एक कार्गो पकड, प्रदान गरिन्छ।
यस्तो थोक वाहक कार, थोक कार्गो, गाई र जस्तै को परिवहन लागि फ्रिज, ट्रेलर समूहहरू, कन्टेनर जहाज, काठ जहाज भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जमाई परिवहन perishable खाद्य पदार्थ - फल, माछा वा मासु। , विश्वसनीय इन्सुलेशन, प्रशीतन एकाइहरु माइनस बीस-पाँच पाँच डिग्री को एक तापमान मा लगातार ठंडा प्रदान - को कार्गो धारण। आधुनिक रेफ्रिजरेटर मात्र तीव्र चिसो बनाउन तापमान कायम गर्न सक्दैन, तर पनि, तिनीहरूले उत्पादन र परिवहन फ्रिज बुझाउँछ। फल परिवहन लागि ड्राई कार्गो जहाज, सबै धारण को परिस्कृत वेंटिलेशन प्रदान गरिन्छ।
को कार्गो जहाजहरू प्राविधिक विशेषताहरु perishable खाद्य पदार्थ रूपमा, माथि बाह्र हजार टन, यस्तो थोक सामान्य-उद्देश्य जहाजहरु भन्दा उच्च वाहक को गति क्षमता उठाने प्रदान र शीघ्र वितरण आवश्यक हुन सक्छ। कन्टेनर ट्रक दस बीस टन हरेक वजन कन्टेनर मा अग्रिम प्याकेज सामान ओसारपसार र पोत नै माथि तीस गर्न छलछामको गाँठो को गति मा बीस हजार टन र चाल उठ्छ। कन्टेनर चाँडै र सजिलै कारण कन्टेनर डेक को धारण एक व्यापक खुलासा अनुकूल छ भन्ने तथ्यलाई गर्न लोड र unloaded। gantry क्रेन - अक्सर, को लोड र उतराई सुविधाहरु टर्मिनल छन्। काठ - कन्टेनरको एक प्रकारको, यो नौका-भनिन्छ लाइटर, तिनीहरूले पोत सिधै पानी मा discharged र घाट गर्न towed छन्।
मिति यस प्रकारका पोत छिटो, यो शिल्प शक्तिशाली, सबै समुद्री शक्तिहरु छ, र तपाईं चाँडै लोड र उतराई गर्न अनुमति दिन्छ - दस पटक बस आयात र जहाज को निर्यात लोड जो विशेष ट्रेलर, सुसज्जित जुन छैन जहाजहरु मा भन्दा छिटो। औद्योगिक विकास एकदम विस्तार र देशहरू बीच व्यापार बलियो छ, यो लामो दूरी निर्माण उपकरण, कृषि, यातायात भन्दा ओसारपसार गर्न अब आवश्यक छ। समुद्र र नदी कार्गो जहाज राम्रो यस्तो कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सकिएन।
मा धारण बस रोल्ड जुन ट्रेलर ट्रेलर मा कार्गो बोकेको। क्षमता ट्रेलर - हजार दस हजार एक टन देखि, र गति - बीस-छ छलछामको गाँठो सम्म। यो कार्गो जहाज को सबै भन्दा होनहार र चलिरहेको आज प्रकार छ। तिनीहरूले निरन्तर सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। को मा कार्गो बाहेक धेरै ट्रेलर माथिल्लो डेक मा कन्टेनर ओसारपसार गर्न छाँटकाँट छन् धारण। एक piggyback - यस्तो जहाजहरू पनि यसको नाम पायो।
थोक कार्गो परिवहन विशेष नली - थोक वाहक। यो अयस्क र अयस्क केंद्रित, कोइला, मल, निर्माण सामाग्री, अन्न र जस्तै हुन सक्छ। ड्राई कार्गो द्वारा ओसारपसार सबै कार्गो को सत्तरी भन्दा बढी प्रतिशत यो समुद्र वा नदी मार्गहरू थोक बनाउँछ, र यसैले वाहन संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै छ: आज, संसारको छिटो को tonnage को बीस भन्दा बढी प्रतिशत यस प्रकार पर्छ।
थोक वाहक भारी भार र प्रकाश को लागि, सार्वभौमिक विभाजित छन्। फिर्ता अयस्क - - गर्न तेल वा कार, वा कपास, जो: धेरै जहाजहरू दोहरी उद्देश्य लागि छाँटकाँट छन्। अदालत शरीर को कडी मा superstructure र इन्जिन कोठा संग एकल - यस प्रकार। क्षमता तिनीहरूले बस विशाल - अप सोह्र नोड्स गर्न - एक सय र पचास हजार टन सम्म, तर गति कम छ। र lengthwise र crosswise - को selfdistributed कार्गो लागि पर्खाल sloping संग धारण मा सामान ओसारपसार छन्। को निकला र गिट्टी पानी लागि प्रबन्ध ट्यांक पर्खालहरु बीच। कहिलेकाहीं मा अनुदैर्ध्य bulkheads लोड सारे भने, रोल कम गरिएका छन् धारण र दोस्रो तल्ला सजिलो लोड सञ्चालनका लागि reinforcements र thickened फर्श संग डिजाइन गरिएको छ।
अदालत यस प्रकारको पेट्रोलियम उत्पादन, कच्चा तेल, इन्धन तेल, डिजेल इन्धन, पेट्रोल, स्ट्रोक लागि टैंकरों विभाजित छन्; एलएनजी मा; जहाजहरु रसायन पूरा - पिघला सल्फर, एसिड, र जस्तै; पानी, रक्सी, सिमेन्ट - तरल कार्गो को परिवहन। टैंकरों सबैभन्दा संसारमा साधारण हो: संसारको व्यापारी छिटो tonnage को चालीस भन्दा बढी प्रतिशत। यो एकल-डेक पोत, superstructure र इन्जिन कोठा पिछाडी स्थित।
लोड खण्ड compartments मा bulkheads विभाजित छ, ट्यांक भनिन्छ। तिनीहरूलाई केही फिर्ती यात्रामा गिट्टी पानी रूपमा सेवा गर्दैछन्। नाक पंप कोठा मा स्थित छ। टैंकरों अत्यन्तै त संग शक्तिशाली आगो सुरक्षा प्रणाली सुसज्जित आगो जोखिम छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो जहाज - अप supertankers मा चार सय हजार टन गर्न वितरक मा एक हजार टन लोड क्षमता। नदी टैंकरों क्षमता बोकेको पनि आहत छैन, केही यसलाई बाह्र हजार टन छ। यो पनि एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली FREIGHTERS छ। नदी - समुद्र ट्यांकर र तल - माथि फोटो।
द्रवीभूत ग्याँसहरु परिवहन यी जहाज - मिथेन, प्रोपेन, butane, अमोनिया, साथै प्राकृतिक ग्याँसहरु, बहुमूल्य कच्चा माल र उत्कृष्ट इन्धन हो। साधारण ग्याँस द्रवीभूत वा वा chilled वा दबाव। तेर्सो वा ठाडो गोलाकार वा आयताकार - तिनीहरूले सिलिण्डर ट्यांक लगानी गर्न किनभने एलएनजी परियोजना टैंकरों देखि मौलिक फरक छ। एलएनजी टैंकरों मा अलग धेरै विश्वसनीय हुनुपर्छ।
कार्गो सञ्चालन विशेष प्रणाली, पंप, कंप्रेशर्स, पाइप र मध्यवर्ती ट्यांक समावेश जो हालतमा बाहिर। लिन काम मा गिट्टी ट्यांक मानिन्छ छैन, तर यो पक्ष वा डबल तल मा सुसज्जित छ किनभने। ग्याँस यातायात सधैं विस्फोटक हो, त्यसैले त्यहाँ एउटा शक्तिशाली वेंटिलेशन सिस्टम र ग्याँस लिक अलार्म छ। बुझाने आगो कार्बन डाइअक्साइड प्रयोग आउँदैन। हाल, समुद्र र नदी यातायात लागि धेरै लाभदायक छ कि जहाज को संयुक्त वर्ग को मांग - खाली रन बहिष्कृत। त्यसैले त्यहाँ hlopkolesovozy, OBO र समान जहाजहरु।
1967 देखि 1984 को लागि, तीन पोत मा दोस्रो सोभियत संघ seiners 388M परियोजना प्रकार "रुपैया-300 कार्गो जहाज" जारी। चार सय असी छ यस्तो seiners माछा मार्ने, माछा मार्ने, खानी कोर्ट थिए समेत निर्माण गरेका थिए। साथै, यो विशेष परियोजना को आधार मा (प्रसिद्ध "परिश्रम" जस्तै) तीस-तीन अनुसन्धान जहाजहरु देखा छ। लामो समय को लागि बारेमा आधा दर्जन यस्ता जहाजहरु वैज्ञानिक अनुसन्धान उद्देश्यको लागि काम गरे।
सोभियत संघ अवस्थित भएनन्, तिनीहरूको लागि आवश्यक केही जहाज निजी हात मा हो, बेपत्ता भएको छ, र तिनीहरूलाई को भन्दा आफ्नो सेवा गरेको र immobilized उभिए। माछा मार्ने मा बाँकी retrained। सानो रकम मा सुदूर पूर्व यस्तो जहाजहरु मा हाल थप पल्ट सीमा रक्षक हामी काम गरे। यो निजी स्वामित्व माछा मार्ने रुपैया-300 afloat र अब।
उद्देश्य द्वारा वर्गीकरण बाहेक अन्य आधार मा कार्गो जहाजहरु भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो, पानी कायम राख्ने क्षेत्र, इन्जिन को प्रकार, गति सिद्धान्त जीनस प्रस्तावक, आवास को सामाग्री र आकार जलयात्रा को सिद्धान्त हो। सिद्धान्त कायम राख्ने hydrodynamic हुन सक्छ - hydrofoils, airbag, planing र hydrostatic - होभरक्राफ्ट, विस्थापन (catamarans)।
रोलिङ, एक पावर प्लान्ट - - आन्दोलन सिद्धान्तलाई आत्म मा अदालत विभाजन एक pusher शिल्प र tugs, साथै रैक - pontoons, लैंडिंग चरणमा। नेभिगेसन क्षेत्र अनुसार विशिष्ट नौसेना जहाज, मिश्रित (नदी-समुद्र) र देशी नेभिगेसन (नदी) को लागि हुन सक्छ। देशी waterways छोटो उडानहरू लागि हाल डिजाइन। मुख्य इन्जिन प्रकार जहाज मा माल जहाजहरू (आन्तरिक दहन इन्जिन) र डिजेल (मोटर) विभाजन गरेको छ। नौसेना आणविक पनडुब्बी जहाजहरू र पनि turbohody लागू हुन्छ। अदालत प्रोपेलर को प्रकृति मा propellers र पखेटा, व्हील मा विभाजित, पेंच, vodomotnye। शरीर भौतिक प्रकार धातु, फाइबर सिसा, ठोस, काठ हुन सक्छ। साथै, अदालत आत्म-चालित र (को नौका) हुन सक्छ।
कार्गो छैन यात्रु ओसारपसार गर्न प्रयोग विमान र सामान र प्रविधिको एक किसिम। तिनीहरूले तुरुन्तै सजिलै पनि अव्यावसायिक नजर पहिचान र छन्। पखेटा उच्च सेट, को छिल्का को मोटाई, को fuselage स्पष्ट conspicuous छ, केही (भनेर सामान सजिलो लोड र उतराई भूमि नजिक भएको) "stockiness"। को चेसिस मा पाङ्ग्रा एक ठूलो संख्या, एक उच्च ponytail।
एयर कार्गो 1911 मा फिर्ता गर्न थाले - ठेगाना संग। थप विशेष परियोजनाहरु, पाठ्यक्रम, यो, तिनीहरूले मात्र बिसवां थिए भएको थियो। कि अलिकति छाँटकाँट ओसारपसार भार अघि "Junkers" एयर 232. - पहिलो सबै-कार्गो विमान जर्मनी मा निर्मित थियो। Airliners विशेष परियोजनाहरू माल लागि FREIGHTERS भनिन्छ मा निर्माण गरिन्छ। तिनीहरूले यात्रु लागि डिजाइन छैन।
सबै भन्दा ठूलो कार्गो वाहक
यो उडान राक्षस - एक-225 ( "सपना") 1984 मा Antonov डिजाइन ब्यूरो विकास भएको थियो, पहिलो उडान 1988 मा भयो। Shestimotorny turbojet vysokoplan, dvuhkilevoe पुच्छर र बह भाग सुरूवात साइटमा सुरूवात वाहन को भाग ओसारपसार गर्न एक शक्ति-कर्तव्य सिर्जना भएको थियो। सोभियत अन्तरिक्ष कार्यक्रम "Buran" दुई भन्दा बढी सय पचास टन उठाउनु गर्न सक्षम छ कि यस विशेष विमान प्रयोग समावेश छ।
लकहीड सी-5 ग्यालेक्सी - 1968 मा जन्म अमेरिकी कार्गो airliner, एक सैन्य माल ढुवानी गर्ने जहाज, साथ छ Armored कर्मियों वाहक, दुई ट्यांक, BMP-चार, छ हेलिकप्टर "अपाचे" ले सक्षम छ। ह्युजले एच-4 हर्कुलेसक्लस्टर - धेरै शक्तिशाली जिज्ञासा 1947 शुरूआत छ, यो wingspan नब्बे-आठ मिटर छ। अब यो एक प्रतिलिपि बनेको थियो पछि, विमान संग्रहालय छ। Boeing 747-8I - COMBI विमान, 2008 मा उत्पादन मा जारी। उहाँले टेकओफ चार सय चालीस दुई टन उठ्छ, तर बोर्ड मा कार्गो भन्दा अन्य लगभग छ सय यात्रु लाग्छ।
Ulan-Ude उड्डयन प्लान्ट, Buryatia
यो साँच्चै खराब कार-सुरक्षित छ सीट?
"Varyag" - विमान वाहक। वर्णन, विशेषताहरु, फोटो
Aberrant अग्न्याशय: निदान, लक्षण र उपचार
स्पाइनल कर्डको पङ्क्ति
तपाईं कसरी पछि एक मान्छे रन बनाउन मा सरल सुझाव
अलेक्जेन्डर Kogan: जीवनी र काम
लोक उपचार को उपचार: हृदय को बाँया ventricle को Hypertrophy। कारण, लक्षण र। निदान परम्परागत व्यञ्जनहरु